မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ကို စိတ်ဝင် တစား လေ့လာနေသူများ အားလုံး စိတ်ဝင်စားနေသော မေးခွန်း တခု ရှိသည်။ ထို မေးခွန်း မှာ ဓ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲ သွားမှာလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။
အချို့ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဝံ့မရဲ အကောင်းမြင် ကြတာ မျိုးရှိသည်။ အဲလို မြင်သူအချို့ တွင် လည်း ပြင်ပ အတိုက် အခံဘက် မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ လည်း ပါဝင် လာခဲ့ ပေသည်။ အချို့ ကြတော့လည်းဒီသောက်စစ်အစိုးရလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘာတွေများ မျှော်လင့်နေရဦးမှာလဲ။ အဲဒီအာဏာရူးတွေက သူတို့စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အင်ထုထားတာ
ဆိုပြီး အယုံအကြည်မရှိ အဆို တင်သွင်း ကြသည်။ တကယ်တော့ ပြောတဲ့ သူတွေလည်း အလွန် မဟုတ်ချေ။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် စစ် အစိုးရ အာဏာရ လာပြီးကတည်း က ပြည်သူ လူထု အပေါ် ရိုးသားစွာ ဆက်ဆံ တာဆိုလို့ မရှိ သလောက်ပင် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် လည်း ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေ အမှူးပြုသော မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့ စီစဉ်သော ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သတ်ပြီး တစ်စက်မှ အကောင်းမပြောချင်ကြတာ သိပ်တော့ မလွန်ပေ။
ထိုအခြေအနေ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေ က မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော စစ် အစိုးရ အခေါ် တပ်မတော် နေ့ အခမ်းအနား တွင် ပြောကြား ခဲ့သောမိန့်ခွန်း က စစ်အစိုးရ ၏ သဘောထား ကို ပိုမို ထင်ဟပ် လာစေခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး က ၄င်းစိတ်ကြိုက် ဖန်တီးထားသော မြို့တော်အသစ် နေပြည်တော် တွင် ကျင်းပသည့် စစ်ချီ အခမ်းအနားအတွင်း စစ်သည် ၁၃ဝဝဝ ရှေ့တွင် မိန့်ခွန်း တစ်ရပ် မြွက်ကြား ခဲ့ရာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်းသော အချက်များလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးက ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် ခေါင်းဆောင်သောNLD ပါတီကို လုံးဝပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သည် ပြည်သူ လူထု ၏ စိတ်ဆန္ဒ အတိုင်း ရေးဆွဲပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်သူ က မလိုလားသောNLDကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့ မလိုကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေ ကဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်သူ လူထု အမှန်တကယ် အလိုမရှိသူ မှာ ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် လား၊ ၄င်းကိုယ်တိုင်လားဆိုသည်ကိုမူ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး အမှန်အတိုင်း သိလောက်ပါသည်ဟု ပြည်သူများက ယုံကြည်ပါလိမ့်မည်။
ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် သည် မြန်မာ ပြည်သူများ သာမက ကမ္ဘာကပါ လေးစားရသော ခေါင်းဆောင် ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နေကြောင်း မှာ အလွန်ခိုင်မာသော အမှန်တရား တရပ် အဖြစ်သက်သေ ပြနေ ပါသည်။ ထိုသို့သော အမျိုးသမီးမျိုး ကိုမှ အတိုက်အခံ လုပ်နေရသော မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခမျာ ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် ကို အလွန်ကြောက် နေသည်မှာ လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံး အသိပင်။ စစ် အင်အား နှင့် လက်နက် စွမ်းအား ကို မတရား အသုံးချကာ အာဏာ ကို အဓမ္မ သိမ်းပိုက် ထားသော အာဏာရူးတွေ အဖို့ ပြည်သူ က ထောက်ခံသော၊ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့ ထောက်ခံမှု ကို လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် ရရှိခဲ့သော ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် နှင့်NLDပါတီကို ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပါဝင် ခွင့်ပြု လိုက်ပါက မျောက်မီး ခဲကိုင်သလို ဒုက္ခကြီး သွားမည် ကို မသိဘဲ မနေပါ။
NLDပါတီကလည်း ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ရန် အတွက် ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြန်လည် စဉ်းစား သုံးသပ် ရန် နှင့် တခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါသော အချက်အလက်များ အတွက် လည်း တောင်းဆို ထားခဲ့ သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သူတို့ ပါးစပ် ထဲတွင်ရှိသော အပုပ်ချ စကားလုံးတိုင်း ကို အားရပါးရ သုံးစွဲကာ ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် ကို သိက္ခာ ချတော့သည်။ စစ် အစိုးရ ၏ အာဘော်အရ ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် ခမျာ တိုင်းပြည် သစ္စာဖောက်ကြီး ဖြစ်လိုက်၊ ပုဆိန် ရိုးကြီး ဖြစ်လိုက်၊ အာဏာကို အာသာငမ်းငမ်း တပ်မက်သူကြီး ဖြစ်လိုက်နှင့် အကြီးစား ဗီလိန်ကြီး ဖြစ်နေ ရရှာသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်သူများ ၏ စိတ် တွင် အပုပ်ချ ခံရသူ နှင့် အပုပ်ချနေသူ ဘယ်သူ့ အပေါ် မျက်မုန်းကျိုးနေသူ ကို စစ် အာဏာရှင်များ တိတိကျကျ သဘောပေါက် ဖို့လိုပါသည်။
၁၇ မိနစ်ကြာသော မိန့်ခွန်း အတွင်း ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသန်းရွှေ က ၄င်းအနေ နှင့်NLDအား မည်သည့် နည်း နှင့်မျှ လက်မတွဲ နိုင်ကြောင်း၎င်း၏ သဘောထား ကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ကြေညာ ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ မည်သို့ပင် ဖိအားပေး တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေပါစေ၊ NLDမပါဘဲ ဆင်နွှဲရမည့် အခြေအနေ ရောက်နေ ပေတော့မည်။ စစ် အစိုးရ သည် နိုင်ငံတကာ အစိုးရ နှင့် မြန်မာ ပြည်သူများ ၏ လိုလားမှု ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား ပြသ ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၄င်း အနေ နှင့် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အပြီးတိုင် လက်စတုံး လိုက်ပြီး သေနတ် နှင့် ချိန်ကာ ထောက်ခံ မဲ ရယူထားသော ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ကို အတည်ပြုရန် လုံးပမ်း လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင် သို့ အရောက် ချီတက်ရန်ဟု ကြွေးကြော် ထားသော်လည်း ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ သည် မြန်မာ ပြည်သူတို့ ၏ ဆန္ဒ အမှန် နှင့် ဖီလာ ဆန့်ကျင်ပြီး စစ် အစိုးရ စိတ်ကြိုက် ပုံစံ ချထားသော အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးမှန်း အသေအချာသိသော်လည်း ကမ္ဘာ ကရော၊ မြန်မာ ပြည်သူများ ကပါ ဘာမှ မတတ် နိုင်ချေ။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ သည် ရိုက်ခတ် လာသော စီးပွား ပျက်ကပ်ကို အလူးအလဲ တုန့်ပြန် ကာကွယ်ရင်း ကိုယ့်နိုင်ငံ အရေးထက် မြန်မာ့ အရေးကို မည်သည့် နည်းနှင့်မျှ အာရုံ မစိုက်နိုင်ပေ။ ထို့အတူ စစ် အစိုးရ ၏ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လူသတ်ပွဲကို မျက်ဝါး ထင်ထင် ကြုံတွေ့ ထားသည့် မြန်မာ ပြည်သူများ အနေနှင့် လည်း နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ရင်ထဲမှ ဆန္ဒများကို ကျည်ဆန် နှင့် ဖက်ပြိုင်ပြီး ဖော်ထုတ်ပြဖို့ မရဲရင့် နိုင်တော့ပေ။ မြန်မာ စစ် အစိုးရ အတွက်တော့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်သည် မျက်ဖြူဆိုက်လေ၊ ဆရာကြိုက်လေဆိုသော စကားအတိုင်း good ပြီးရင်း goodနေတော့သည်။
စစ် အစိုးရ အဆိုပြုထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ ဥဒေသစ်အရ လွှတ်တော် အမတ်နေရာ ၄၄ဝ ကို ပြည်သူ့ ပါလီမန်က ရွေးကောက် တင်မြှောက်ပြီး ၂၂၄ နေရာကို အမျိုးသား ပါလီမန်က ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။ အမတ်နေရာ စုစုပေါင်း၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကိုသာ တပ်မတော် က ရရှိမည် ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ သို့သော်လည်း ပါတီများ အားလုံးလိုလို သည် စစ်အစိုးရ ဘက်တော်သား ခိုင်းရာလုပ်၊ စေရာသွား လူတန်းစားများ သာ ဖြစ်မည်ဆိုသည်ကို လူတိုင်း ရိပ်မိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စစ် အစိုးရ သည် ပြည်သူ ကို နားလှည့်ပြီး ပါးရိုက်ခြင်း သာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံး သိကြ ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အနေနှင့် မြန်မာ့ ပြည်တွင်းရေး ကို လက်နက် အားကိုး နှင့် အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်မည် ကို သဘောပေါက် ထားသလို နိုင်ငံတကာ ဖိအားများ ကိုလည်း ရေးကြီးခွင်ကျယ် ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုကြောင်း သေသေချာချာ သိထား ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ၄င်း စိတ်ကြိုက် ပုံသွင်း ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဓဘယ်သူတေတေ၊ ငတေမာလျင်ပြီးရောဓဟူသည့် စကားကို လက်ကိုင်ထားကာ ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူ အချို့ကလည်း အပြောင်းအလဲ အချို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ချက် ထားနေကြသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် လွတ်လပ်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တိုးတက် ရရှိလာမည်ဟု ယုံကြည် နေကြသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ကဲ့သို့သော အခွင့်အရေးမျိုး၊ အခြားသော စက်မှု နှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍများ တွင် ပိုမို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင် လာနိုင်မည့် အခွင့်အရေးမျိုးများ ရရှိ လာနိုင်မည်ဟု စိတ်ကူး ယဉ်နေ ကြသည်။ စက်တင်ဘာ လူသတ်ပွဲ အတွင်း ကမ္ဘာသိ အောင် လူမဆန်ခဲ့သော စစ်အစိုးရ အနေ နှင့် နိုင်ငံတကာ ၏ ပြစ်တင် လက်ညှိုးထိုး နေမှုကို အာရုံလွှဲရန် ထိုသို့သော လုပ်ပိုင်ခွင့် အချို့ကို ဖွင့်ပေးခြင်း ဖြင့် လှည့်ကွက် တမျိုး ပြောင်းမသုံးဟု မပြောနိုင် သဖြင့် ၄င်းတို့ ၏မျှော်လင့်ချက်များ အကောင်အထည် မပေါ်လာဟု ဆိုရန်မှာ လည်း ခက်ခဲ နေဆဲဖြစ်သည်။
စစ် အစိုးရ သည် ပြည်သူ လူထုကို ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ကာ ထောက်ခံမဲ များ ကောက်ခံပြီး မဲ အရေအတွက် ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရရှိကြောင်း ကြေညာ ခဲ့သည်။ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး ကြောင့် နိုင်ငံ သမိုင်းတလျှောက် အဆိုးရွားဆုံး သေကြေ ပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့ နေသည့်တိုင် စစ် အစိုးရ သည် ပြည်သူ လူထု၏ သဘာဝ ဘေးဆိုးတွင် နစ်မွန်းနေမှု ကို ဥပေက္ခာပြုကာ ထောက်ခံ မဲ ရရေးကိုသာ လုံးပမ်း နေသဖြင့် တကမ္ဘာလုံး က စက်ဆုပ်စွာ ဝေဖန် ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေ ကမူ အေးအေး ဆေးဆေးပင်။ အရှက်မရှိ သဖြင့် အစိုးရ လုပ်နေသော အာဏာရူးကြီး သည် နိုင်ငံတကာ ဖိအားများ ကို ဖြေရှင်းခြင်း မပြုသလို စိတ်ထင်တိုင်း ကြဲနေသည့် အပြုအမူများ ကိုလည်း ရပ်တန့်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကို အတိုက် အခံပါတီ ဟူ၍ လုံးဝမရှိဘဲ တရားမျှတစွာ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း အသံကောင်း ဟစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါ သည်။ သန်းရွှေ တစ်ယောက် ဘယ်လမ်း ကိုလျှောက်နေကြောင်း လူတိုင်း သိပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုလမ်း ကို ပိတ်ဖို့ ကိုမူ မည်သူမျှ မတတ်နိုင်သေး သည်ကို နာကျင်စွာပင် သဘောပေါက်ကြမည်သာ။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် အတွက် အခွင့်အရေး မရှိသလို ပြည်သူများ ကလည်း မလိုလား၊ မနှစ်သက်သော အဓမ္မ လုပ်ဆောင်မှု တခုသာ ဖြစ်သော် လည်း ထို ရွေးကောက် ပွဲကြီး ကျင်းပမည့် ကာလသည် တစထက်တစ နီးကပ် လာနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဓတရားကို နတ်စောင့်သည် ဆိုသော စကားသည် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အတွက် တိမ်ဖုံးသောလ ဖြစ်နေပြီလော မပြောတတ်ပါ။ ဘုရားမဲ့ ဝါဒီ စစ် အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းရွှေ သည် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကြီး အပြီးတွင် အာဏာရှင်စနစ် အုပ်ချုပ်ရေးမှ သက်ဦးဆံပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးသို့ အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရေး ဒီမိုကရေစီ ဟု ကြွေးကြော် နေဆဲသာ ဖြစ်ပါ တော့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/19/20090အကြံပြုခြင်း
အရှေ့အရပ်မှ ပြေးကြ လွှားကြ
တောင်အရပ်မှ လေသံ မိုးသံ မုန်တိုင်းသံများ
ရေမှာ ငုတ်လျှိုး ကုန်းမှာ လွင့်မျော
ထကြည့်သောအခါ မြောက်အရပ်မှာ မီးခိုးမှိုင်းများ
ဝေ့ဝေ့ဝိုင်းလျှက် ကျည်သံ ဗုံးသံ ထစ်ချုန်းမှုနှင့်
၁၇.၁.၂ဝဝ၉ (နံနက် ဝ၅ ဝဝ နာရီ)
ပြီးတော့၊ ရန်ကုန်နဲ့ မြို့လယ်ခေါင်နဲ့
Library ရှေ့မှာလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဖူးအုံးမှ
Document No.: 2009/04/09
Subject: Michael Kyaw Myint Hua Hu [Notice of Hearing]
Published Date: 04/17/2009
2009 BCSECCOM 198
Michael Kyaw Myint Hua Hu
¶ 1 The Commission will holdahearing at which the Executive Director will tender evidence, make submissions and apply for orders against Michael Kyaw Myint Hua Hu (Hu) under sections 161 and 162 of the Securities Act, RSBC 1996, c. 418 (the Act), based on the following facts:
1. Hu isaresident of British Columbia. Hu hadabusiness address located at Suite 651, 666 Burrard Street, in Vancouver, BC during the relevant time.
2. On February 12, 2007, Hu becameadirector of Maple Leaf Reforestation Inc. (MPE). Hu was the Chairman of MPE for the period July 2007 to January 2008.
3. MPE is an Alberta company incorporated on February 24, 2005. MPE isapublicly traded company on the TSX Venture Exchange (TSXV).
Material fact not generally disclosed
4. On October 16, 2007, MPE issuedanews release generally disclosing that it had entered intoamemorandum of understanding to establishabio diesel production project in China (the China Project).
Special Relationship with knowledge of material fact
5. Between September 21, 2007 and October 12, 2007 (the Trading Period), Hu was inaspecial relationship with MPE as he was its Chairman andadirector.
6. Hu had knowledge of the China Project and was involved in the events leading up to the October 16, 2007 news release.
7. During the Trading Period, Hu, while inaspecial relationship with MPE and with knowledge of the China Project, purchased securities of MPE.
8. Hu purchased the MPE shares through another person’s (the Account Holder) online trading account (the Trading Account). Hu accessed the Trading Account by using password information provided by the Account Holder.
9. During the Trading Period, Hu accessed the Trading Account and purchasedatotal of 887,800 shares of MPE at an average price of $1.00 foratotal of $861,445.80
10. On October 12, 2007, the last trading day before the news release announcing the China Project, shares of MPE closed ataprice of $1.30. On the day after the issuance of the news release, shares of MPE opened at $1.60.
11. By engaging in the above conduct, Hu breached section 86, now section 57.2 of the Act.
12. Staff of the Commission issuedasummons to Hu dated April 7, 2008 (the Summons) requiring Hu to attend an investigatory interview under oath. The Summons was sent withaletter of the same date directing Hu not to disclose information about the Summons to anyone except his legal counsel.
13. After receiving the Summons, Hu discussed with the Account Holder information relating to the Summons. This conduct is contrary to section 148 of the Act.
14. In accordance with the Summons, Hu attendedacompelled interview on June 10, 2008. During the interview Hu made false or misleading statements, including that he did not know the Account Holder, contrary to section 168.1(1)(a) of the Act.
¶2At the Hearing, Hu may be represented by counsel, make submissions and tender evidence. Hu is requested to advise the Commission of his intention to attend the Hearing by informing the Secretary to the Commission at PO Box 10142, Pacific Centre, 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1L2, phone: 604-899-6500; email: commsec@bcsc.bc.ca.
¶3Hu or his counsel is required to attend at the 12th Floor Hearing Room, 701 West Georgia Street, Vancouver, BC, on Thursday, May 7, 2009, at 10:00am if he wishes to be heard before the Commission setsadate for the Hearing.
¶4If Hu or his counsel does not appear at the Hearing, the Executive Director may apply to have questions of liability and sanction heard at the same time. Determinations adverse to Hu may be made in his absence.
¶5April 9, 2009
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း
Publish at Scribd or explore others: Books culture
သေနင်္ဂစစ်ဗျူဟာ [ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ဆန်း ပြောဟောချက်များ]
၁၃ဝ၄ ခုနှစ်၊ သီတင်းက္ဆွတ် လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်၊ ကြာသပတေး (၅၊ ၁၁၊ ၄၂) ဗမာ့ခေတ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါရှိတဲ့ "သေနင်္ဂစစ်ဗျူဟာ" နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ဆန်းရဲ့ ပြောဟောချက်များကို ၁၉၈၅ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ 'ပုရပိုက် စာပေနှင့် အနုပညာ' က ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်းဟန်တင်ရဲ့ 'ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရှားပါး မိန့်ခွန်းများ' စာအုပ်မှနေ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂျပန် စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အတူ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (ရှေ့ဆုံးတန်း ဝဲမှ စတုထ္တမြောက်) ကို တွေ့ရစဉ်။
ရန်ကုန် နေပြည်တော် ခန်းမကြီးတွင် ကျင်းပလျက် ရှိသော ကျောင်းဆရာများ ကျောင်းပိတ်ရက် ခေတ်သစ် ပညာသင်တန်း၊ သီတင်းက္ဆွတ် လပြည့်ကျော် ၈ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဆန်း မိန့်ကြားသော သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်ပညာ ခေါ် မိန့်ခွန်းရှည်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း။
ကျွန်တော့်ကို သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်အတတ် အကြောင်း ပြောကြားဖို့ တာဝန် ပေးထားတယ်။ သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်ပညာ ဆိုတာဟာ အပြောသမားတို့ အလုပ်မဟုတ်ပါ၊ အလွန်တရာ ခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ ပညာရပ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကို ပြောရလျှင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပဲ သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်ပညာကို မတတ်သေးပါ၊ စစ်ဆင်၊ စစ်ချီ၊ စစ်တက်၊ စစ်ထိုး အလုပ်ဟာ တော်တော့်ကို အလေ့အကျင့်နဲ့ ပညာ ဗဟုသုတနဲ့ ရနိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုး မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော် ယခု အဓိကထားပြီး ပြောသွားမှာကတော့ ကာကွယ်ရေး ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေး ဆိုလို့ ဘယ်လို ဘယ်နည်း ကာကွယ်မယ် ဆိုတဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ ပါးစပ်ပြောနဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေချည်း ဆိုရင်လဲ မောရုံပဲ၊ နွားချေရာ ကွက်ကွက်ကလေး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကလေးချည်း ကြည့်ပြောနေလို့လဲ မောရုံပဲ၊ အခြား တိုင်းကြီး ပြည်ကြီးတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ရေးရာ ဗမာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး စဉ်းစားမှ အရာ ရောက်ပါလိမ့်မည်။
တိုင်းသစ်ပြည်သစ် ထူထောင်ဖို့ ကိစ္စကြီး
အခု ဗမာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေဟာ စစ်ကြီးပေါ်မှာ အမှီပြုနေတော့ ဘာမှ မရေရာသေးပါ၊ မရေရာသေး သော်လည်း အရှေ့ အာရှတိုက် စစ်ပွဲကြီး အပြီးအတိုင် အနိုင်ရပြီး နီပွန် နန်းရင်း ဝန်ကြီး၏ ကြေညာချက်အတိုင်း ဗမာတွေဟာ နီပွန်တို့ သဘောထား ကောင်းစွာ နားလည်ပြီး နီပွန်တို့နှင့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပူးပေါင်းလိုသော သဘောကို ပြလို့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့ အခြေမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ် ဘယ်လို ကာကွယ်မယ် ဆိုတာကို စဉ်းစား ရပါလိမ့်မယ်။
ဗမာပြည်ဟာ ရှေးက မကြုံဘူးတဲ့ စစ်ကြီးမှာ စစ်မြေပြင်ကြီး အဖြစ်ခံခဲ့ရလို့ တတိုင်း တပြည်လုံး ပျက်စီး နေပါတယ်။ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် ထူထောင်ဖို့ ကိစ္စကြီး ရှိနေပါတယ်။ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် ထူထောင်တယ် ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် တကယ့် အလုပ်မှာ မလွယ်ပါ၊ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ ညည်းညူစရာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံရ ပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် ထူထောင်ရာမှာလည်း ကာကွယ်ရေးဟာ အရေးကြီးဆုံးပါ၊ ပညာရေးတွေ၊ စီးပွားရေးတွေ၊ လမ်းပန်း အဆောက်အအုံတွေ ဘယ်လိုပဲ သစ်လွင် သစ်လွင် ခမ်းခမ်းနားနား တည်ဆောက် နိုင်တယ်ထားအုံး၊ ကာကွယ်ရေး မလုံလောက်ရင် တနေ့မှာ အားလုံး ပြိုပျက် ကုန်အုံးမှာပဲ၊ ကြိုးပမ်းကြရ သမျှ အလကား ဖြစ်မှာပဲ။
လောလောဆယ် လိုအပ်နေသော ကိစ္စကြီး
ကျွန်တော့ သဘောကို ပြောရရင် တိုင်းသစ်ပြည်သစ် တည်ထောင်မှု စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ကြီး တခုဖွဲ့ဖို့ လောလောဆယ် လိုပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ကြီးက တပြည်ထောင်လုံးကို လိုက်လံ စုံစမ်း ကြည့်ရှုပြီး ရသမျှ အကြံဉာဏ်ကို အစီရင်ခံစာ ရေးသင့်တယ်၊ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် တည်ဆောက်ဖို့ ဘယ်ဌာန၊ ဘယ်ဌာန အတွက် ငွေဘယ်လောက် ကုန်မယ်၊ လူ အင်အား ဘယ်လောက် လိုမယ် ဆိုတာတွေ အစီရင် ခံရမယ်။ လိုတဲ့ ငွေကိုလည်း ဘယ်နည်းနဲ့ ရအောင် ရှာမယ် ဆိုတာကိုလဲ အစီရင် ခံရမယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ပြီးမှ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် ထူထောင်ဖို့ ဖြစ်မယ်။
အဲဒီ အစီရင်ခံစာမှာလဲ ကာကွယ်ရေး အတွက် ဘယ်လောက် လိုမယ်၊ ဘယ်လောက် ကုန်မယ် ဆိုတာ အဓိက ထားပြီး အစီရင်ခံဖို့ လိုလိမ့်မယ်၊ ကာကွယ်ရေး အတွက် အများဆုံး အကုန်ခံရမှာကတော့ အမှန်ပဲ၊ ဒီဘက်ကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ လျော့လို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာလည်း ဒီလိုပဲ အကုန်ခံ ကြရတာပဲ။ ကာကွယ်ရေး ဘက်မှာ အများဆုံး အကုန်ခံလိုက် ရတော့ အခြားသော စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဆိုတဲ့ ဘယ်တွေမှာ နည်းနည်းစီ လျော့သွားလိမ့်မယ်၊ ဒီလို လျော့သွားရင်ပဲ လူတွေကတော့ ညည်းညူ ကြတော့မှာ အမှန်ပဲ။
လူ ၁ဝဝ မှာ ၇ဝ ဟာ ဘာမှ နားမလည်ကြသေးဘူး
ကျွန်တော် ဆိုဝံ့တယ်၊ လူ ၁ဝဝ မှာ ၇ဝ ဟာ စစ်ရေး စစ်ရာနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှ နားမလည် ကြသေးဘူးလို့၊ နားမလည်ကြတာလဲ အဆိုးတော့ ဆိုစရာ မရှိဘူး၊ တသက်လုံး က္ဆွန်ခံ လာကြရပြီး၊ ဒီလို စစ်ရေး စစ်ရာမျိုး၊ ဒီလို တိုင်းပြည်ရေးရာမျိုး၊ ဒီလို ခေတ်မျိုး အခါမျိုးက ကြုံမှ မကြုံဘူးကြ သေးဘဲကိုး။ အမှန်ကို ပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ တတွေဟာ ဒီလို နေကြ၊ ထိုင်ကြ၊ ဝတ်ကြ၊ စားကြတာကို လွန်လှပြီ၊ စစ်ဖြစ် နေတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတာ ဘယ်လို တိုင်းပြည်မှ ဒီလို မနေနိုင်ကြဘူး။ စစ်ရေး စစ်ရာ ဆိုတာလဲ ခုခေတ် စစ်မျိုးက ရှေးခေတ်က စစ်မျိုးလို တိုက်တဲ့လူက ထွက်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး၊ စစ်သားတွေသာ စစ်စိတ် စစ်သွေး ရှိနေရုံနဲ့ မပြီးဘူး၊ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး၊ လူကြီး တယောက်မကျန် စစ်စိတ် စစ်သွေး ရှိကြမှ နီပွန်လို ဘူရှီဒိုစိတ် ရှိကြမှ ဖြစ်တယ်၊ နီပွန်ပြည်မှာ ဆိုရင် ကျောင်းသားငယ်ကလေးက သိပ္ပံ ကျောင်းသားကြီးတွေ အထိ အရပ်သားတွေဆိုလဲ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ အားလုံး စစ်စိတ် စစ်သွေး၊ ရဲသွေး ရဲမာန် ရှိကြတယ်။ စစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် စိတ်ငြိုငြင်စရာ ခြိုးခြံစရာ ကြပ်တည်း ဆင်းရဲမယ့် အရာတွေကို တင်းခံဖို့ အသင့် ရှိကြတယ်။ နီပွန်ပြည်မှာ ယောက်ျားမှန်သမျှ စစ်မှုထမ်းဖို့ရာလဲ အသင့် ဖြစ်ကြတယ်။
ကာကွယ်ရေး အကြောင်း ပြန်ဆက်ရရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ရေတပ်၊ ကုန်းတပ်၊ လေတပ် ဆိုတဲ့ တပ်ကြီးတွေ အနက် ကုန်းတပ် အင်အားဟာ အလိုဆုံးပဲ၊ ရေတပ်ဟာ သိပ် မလိုလှဘူး၊ လေတပ်ကတော့ အသင့်အတင့် လိုတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေကို ကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်ဟာ သူ့ အခြေအနေ အရ ရေတပ်ကို များစွာ အားကိုးတယ်၊ ဒါလဲ သူတို့ အမှားပဲ။ ရှေးက စိတ်တွေ မပျောက်လို့ပဲ၊ ဂျာမဏီဟာ လေတပ်နဲ့ ကုန်းတပ်ကို အားကိုးတယ်၊ ဒါဟာ သူ့တိုင်းပြည် အခြေအနေနဲ့ သင့်လျော်တယ်။ နီပွန်ပြည်ကတော့ ကုန်းတပ်၊ ရေတပ်၊ လေတပ် အားလုံးပဲ အညီအညွတ် အားကောင်းတယ်။ တပ်သုံးမျိုးကို စဉ်းစားရင် ကုန်းတပ်ဟာ အရေးအကြီးဆုံးပဲ၊ တကယ် တိုက်ရမှာလဲ သူပဲ၊ မြို့တွေ နယ်တွေ သိမ်းရာမှာလဲ သူမှပဲ။ ရေတပ် ဆိုတာ စစ်သင်္ဘောကြီး တစင်း နှစ်စင်း ရှိရုံနဲ့လဲ မဖြစ်ဘူး၊ များများ ရှိပြန်ရင်လဲ လေယာဉ်ပျံနဲ့ ရေငုတ် သင်္ဘောကလေးနဲ့ တိုပီတိုနဲ့ ပစ်ခွင်းလိုက်ရင် မြုပ်ကုန်တာပဲ၊ ပရင့်စ် အော့ဖ် ဝေးလ်နဲ့ ရီပါလ်စ် စစ်သင်္ဘောကြီးတွေ အဖြစ်အပျက်ကို သိကြပြီပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ တာဝန်ကလဲ စစ်သားပို့ဖို့၊ ရိက္ခာပို့ဖို့၊ ရန်သူသင်္ဘော အသွားအလာ ဖျက်ဆီး နှောင့်ယှက်ဖို့၊ ဒါလောက် အသုံးကျတာပဲ၊ တိုင်းပြည်သိမ်းရေးနဲ့ တယ်ပြီး မသက်ဆိုင်လှဘူး။
ကုန်းတပ် ဆိုရာမှာလဲ ခြေလျင် တပ်တွေချည်း ထားလို့တော့ တယ်ပြီး အရေးမပါလှဘူး၊ စက်ယန္ဈယားနဲ့ မော်တော်ကား တပ်တွေပါ ထူထောင်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ စရိတ်ကတော့ တော်တော်ပဲ ကုန်လိမ့်မယ်။ မော်တော်ကားတပ် အကြောင်း စပ်မိလို့ ပြောရအုံးမယ်။ လူတွေဟာ ဘယ်လောက် စစ်ရေး စစ်ရာ အကြောင်း နားလည်မှု ဝေးသလဲ ဆိုရင် ဗမာပြည် အတွက် မဟာမိတ် နီပွန်တို့နဲ့ အတူ ကျုပ်တို့ တိုက်လာတုံးက ကားသိမ်းတာတွေကို အပြစ်ဆို ကြတယ်လို့ ကြားရတယ်။ စစ်ဆိုတာ တနာရီနဲ့ ရောက်ရမယ့် နေရာ တနာရီနဲ့ အရောက် သွားရမယ့် တာဝန် ရှိတယ်။ အချိန်ထဲမှာ အသက်ဝင် နေတယ်။ အဲဒီတော့ တွေ့ရာကို အရ သိမ်းပြီး စီးသွားရမယ်၊ စစ်ရေးထက် ဒီပြင် အရေးကို မကြည့်နိုင်ဘူး။ တချို့က ပြောတယ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်လို့ အပြစ်ဆိုတာပါ၊ ချိုချိုပြောရင် ရပါတယ်တဲ့၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က အရေးကြီးလို့ ကားရှင်တဦးကို ချိုချို ပြောဖူးပါတယ်၊ မရဘူး၊ မရတော့ ရတဲ့နည်းနဲ့ပဲ အတင်း ယူလိုက်ရတယ်၊ သူလည်း တခါတည်း စစ်ရေးကို နားလည်သွားတာပေါ့။ (ရယ်ကြသည်)
ရန်သူကို မိမိက ဦးအောင် တိုက်ရမည်
ပြီးတော့ ကာကွယ်ရေးဟာ ဗမာပြည် ကွက်ကွက်ကလေး ထဲမှာပဲ နေပြီး လာတဲ့ ရန်သူကို ဆီးပြီး ကာကွယ်နေလို့ မရဘူး၊ က္ဆွန်တော်တော့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ရေး စနစ်သည် ရန်သူကို မိမိက ဦးအောင် တိုက်ခြင်းတည်း ဆိုတဲ့ နီပွန်တို့ရဲ့ ဝါဒကို ကြိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဟာ သူ့ပြည်ကလေးထဲမှာပဲ မကြည့်ဘဲ ဂျီဘရော်လတာ၊ မော်လတာ၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင် ဆိုတဲ့ နေရာတွေကို ယူထားတာကို ကြည့်ပါ၊ အဲဒါဟာ အင်ပါယာ တခုလုံး ကာကွယ်နိုင်အောင် တကမ္ဘာလုံး ခြုံကြည့်ပြီး စီမံတာပဲ။ မကြာခင်က ဖြစ်ပွားတဲ့ ဆော်လမွန်ကျွန်း ရေကြောင်း တိုက်ပွဲကို ကြည့်ပါ။ အဲဒါဟာ ဒီကျွန်းကလေးကို ဘာကြောင့် နီပွန်က ဒီလောက် လိုချင်တယ်၊ အမေရိကန်ကလည်း ဘာကြောင့် ခုခံတယ် ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကာကွယ်ရေး အတွက်ပဲ၊ စစ်ကို ရှေ့ဆက်ပြီး ထိရောက်စွာ တိုက်ရေး အတွက်ပဲ။ အဲဒီကျွန်းဟာ လေတပ်စခန်း လုပ်ဖို့ သိပ်ကောင်းတယ်၊ လေယာဉ်ပျံတင် သင်္ဘော ဆိုတာက မြုပ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ ကျွန်းကလေးကိုတော့ မြုပ်ပစ်လို့ မရဘူး။ ဒီလို အရေးပါ အရာရောက်မယ့် နေရာတွေ ကို ကြည့်ပြီး အရ သိမ်းဖို့ဟာလဲ အရေးကြီးတာပဲ။
အားလုံး သုံညက စရမယ့် အလုပ်ချည်းပဲ
ရှေ့ကို ဖြစ်လာမယ့် ခေတ်ကြီးရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ရင် ရှေးကလို တပြည်ထောင်တည်းတည်း ဘယ်သူနဲ့မှ မဆက်ဆံဘဲ နေလို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဆက်ဆံသင့်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေနဲ့ ဆက်ဆံပြီး အစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် နေကြရမယ်၊ အကူအညီ ယူသင့်တဲ့ တိုင်းပြည် ယူရမယ်၊ အရှေ့အာရှတိုက် တခုလုံးမှာ နီပွန်တို့ဟာ အင်အား အတော်ဆုံး အကူအညီ အယူသင့်ဆုံး ဖြစ်တယ်။ နီပွန်တို့ အကူအညီ ယူပြီး ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး အဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ရမယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာမှ မရှိသေးဘူး၊ သုညတွေပဲ ရှိသေးတယ်၊ အားလုံးကို သုံညက စရတဲ့ အလုပ်ချည်းပဲ။
ကျွန်တော်တို့ နီပွန်ပြည်မှာ ရောက်နေစဉ်က ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စက်မှု လက်မှု တည်ဆောက်ရေး ဆိုတဲ့ အရေးတွေကို ကျကျနန လေ့လာခဲ့ဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်။ သို့သော်လဲ ကျွန်တော် သွားရတဲ့ အခါက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အလည်အပတ် သွားရခြင်း မဟုတ်ပါ။ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုး သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်က အထွက်မှာ စုံထောက်တွေ မျက်စိအောက်က လွတ်အောင်၊ နီပွန်ပြည် ရောက်တော့လဲ အင်္ဂလိပ် သံရုံး၊ အမေရိကန် သံရုံးက စေလွှတ်ထားတဲ့ သူလျှိုတွေ မျက်စိအောက်က လွတ်အောင် နီပွန်ကို ရုပ်ဖျက် သွားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ စစ်ရေး စစ်ရာကလွဲလို့ ဒီပြင် ပညာ ဗဟုသုတတွေကို ကောင်းကောင်း မဆည်းပူးခဲ့ရဘူး။
ဗမာပြည် ကာကွယ်ရေးသည် အရှေ့အာရှတိုက်၏ ကာကွယ်ရေး
ကျွန်တော်တို့ နီပွန်ပြည်မှာ ရှိစဉ်က သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်ရလို့ သိလာခဲ့ရတယ်။ စစ်ကြီးပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အရှေ့အာရှတိုက် တိုင်းပြည်တွေဟာ ဘယ်လို အဆက်အသွယ်တွေ ပြုလုပ်ရမယ် ဆိုရင် နီပွန် ကျွန်းကနေပြီး ကိုရီးယားကို ပင်လယ် အောက်ကနေပြီး ရထားလမ်း ဖောက်မယ်၊ ကိုရီးယားက မန်ချူးကို၊ မန်ချူးက တရုတ်ပြည်၊ တရုတ်ပြည်က အင်ဒိုချိုင်းနား၊ ယိုးဒယားကို ဖြတ်ပြီး ဗမာပြည်၊ ဗမာပြည်က အိန္ဒိယ အထိ ရထားလမ်းတွေက တဆက်ထဲ ဖောက်မယ်။ ဒါတွင် မကသေးဘူး၊ အိန္ဒိယ ကနေပြီး အဆင့်ဆင့် ဂျာမနီ ဘာလင်ရောက်၊ ဘာလင်က ပြင်သစ်၊ ပြင်သစ်က အင်္ဂလန် သိမ်းပြီးရင် လန်ဒန်အရောက် ရထားလမ်းဟာ တဆက်ထဲ ဖြစ်သွားမယ်။ အဲဒီလို အခါမှာ ဗမာပြည်ဟာ အရှေ့အာရှတိုက်ရဲ့ အချက်အချာ တိုင်းပြည် ဖြစ်လာစရာ ရှိတယ်။ စစ်ရေး စစ်ရာနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရေး ပြည်ရေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အရေးအကြီးဆုံးပဲ၊ ဗမာပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးသည် အရှေ့ အာရှတိုက် ကာကွယ်ရေး၊ အရှေ့ အာရှတိုက်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးသည် ဗမာပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး ဖြစ်ရမယ်။
အဲဒီ အခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး ကာကွယ်ရေးကို စဉ်းစားရမယ်။ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးအကြီးဆုံး အချက် တချက်ကို ပြောလိုတယ်။ အဲဒီ အချက်ဟာ ဘာလဲ ဆိုရင် လူဦးရေ ပြဿနာပဲ။ တရုတ်ပြည်က သန်းပေါင်း ၄ဝဝ၊ အိန္ဒိယက သန်းပေါင်း ၃၅ဝ ကြားထဲမှ နေရတဲ့ တိုင်းပြည်ကလေး ဖြစ်တယ်။ ဗမာ လူဦးရေဟာ ၁၄.၅ သန်း အလွန်ဆုံး ဆိုတော့ ဘာမှ မပြောပလောက်ဘူး။ တိတိလင်းလင်း ပြောရမယ်။ ဗမာပြည်မှ ဘုန်းကြီးနဲ့ မယ်သီလရင်တွေ ပေါနေဖို့ မလိုဘူး။ ကျွန်တော့ သဘော အလိုပြောရင် တရွာတကျောင်းတောင် မထားချင်ဘူး။ ငါးရွာ တကျောင်း ဘုန်းကြီး တပါးပဲ ကျောင်းထိုင် စေချင်တယ်။ ပရိသတ် ကတော့ ဒီစကားကို ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ်။ ကြိုက်ချင်ကြိုက် မကြိုက်ချင်နေ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကြီးပွားရေးနဲ့ ကြည့်ရင် ဒီဟာ အမှန်စကားပဲ။ နီပွန်ပြည်ဟာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ရေးစစ်ရာ တိုင်းပြည်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေလဲ မနေရဘူး၊ စစ်တိုက် လိုက်ရတယ်။ တိုင်းပြည် ကြီးပွားရေး၊ လောကီ ကြီးပွားရေး အလိုရှိရင် လောကုတ္တရာရေးကို ဘေးချိတ်ထားရမယ်။ နှစ်ခုစလုံး တပြိုင်နက်ထဲ ကြီးပွားချင်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ အခု တိုင်းပြည်မှာ အမှန် လိုနေတာက လူတွေ ကြိုက်ချင်ကြိုက်၊ မကြိုက်ချင်နေ တိုင်းပြည် ကြီးပွားမယ့် နည်းလည်းဟူ သမျှ လူတွေ မလိုက်နာ မနေရမယ့် ဥပဒေ ထုတ်ဖို့ လိုနေတယ်။
ပညာရေး နည်းစနစ်မှာလဲ ယဉ်ကျေးမှု ပညာကို ဖယ်ထုတ် ပစ်လိုက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလဲ အတုခိုးစရာ မလိုဘူး၊ မဟာမိတ် နီပွန်တွေ ပြောသလိုပဲ အနောက်နိုင်ငံသားတွေကို အတုခိုးချင်ရင် သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ အတုခိုးဖို့ မလိုဘူး။ သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ပညာတွေကိုသာ အတုခိုးရမယ်။ ဥရောပတိုက်မှာ ပြင်သစ် လူမျိုးများဟာ အယဉ်ကျေးဆုံးပေါ့။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့ သောက်ကျိုးနဲ ကုန်တာပဲ။ ဗမာတွေဟာလဲ ဘယ်လို ယဉ်ကျေးတယ်။ ဟိရိသြတ္တပ္ပ ရှိတယ် ဆိုတာတွေ ဂုဏ်ယူ ချင်ကြတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည် သောက်ကျိုးနဲမယ့် ကိစ္စတွေပဲ။ မိန်းမလို မိန်းမရ ကိစ္စတွေပဲ။ တချို့က ပြောကြတယ်။ နီပွန် စစ်သားတွေဟာ စုတ်စုတ်ပဲ့ပဲ့ ရေချိုးတော့ ကိုယ်တုံးလုံး တကယ် ရိုင်းတယ်လို့ သူတို့ဟာ အမြင်သာ ရိုင်းပေမယ့် အလိုရှိရင် တိုင်းပြည် အတွက် အသက်စွန့်ဝံ့တဲ့ စိတ်တွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော့ သဘောက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ သူများ ကျွန်ခံ နေရတာထက် ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းနဲ့ သူများ အပေါ်က ဆရာ လုပ်နေရတာကို မြတ်နိုးတယ်လို့ ယူဆတယ်။ (သြဘာ ပေးကြသည်။)
ဘုရားတဆူ ဂူတလုံး ကိုးကွယ်ကြပုံ
သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဆိုရင် စစ်သားကလေး တယောက် စစ်ထဲပဲ ဝင်ဝင်၊ စစ်မြေပြင်ပဲ ထွက်ထွက် တိုင်းပြည် အတွက် အသက်လှူမယ့် သူလို့ ဆိုပြီး တရွာလုံး တမြို့လုံး မီးရထားရုံတို့ သဘောင်္ဆိပ်တို့ လိုက်ပို့ကြတယ်။ သူတို့ စစ်သားတယောက် စစ်မြေပြင်မှာ ကျဆုံးရင်လဲ အရိုးကို ပြာချပြီး သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်ပို့တယ်။ အဲဒီမှာ ရရှာကူနိပ်ရှရိုင်း ဆိုတဲ့ အာဇာနည်ကုန်းကို ပို့ပြီး တတိုင်း တပြည်လုံး ဘုရားတဆူ ဂူတလုံး ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ နီပွန်ပြည်ကြီးဟာ နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ဒီလောက် ကြီးမားလာတာပဲ။ ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ အများကြီး ပြောစရာတွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လဲ ကျွန်တော် ပြောရမယ့် အချိန်လဲ လွန်သွားပြီ။ နောက်ပြောရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီမျှနဲ့ပဲ နိဂုံး ချုပ်ပါရစေတော့။ ဆရာ ဆရာမတို့ တာဝန်ဟာ နောင် ကြီးလာမယ့် ကလေးတွေကို စစ်စိတ် စစ်သွေး၊ ရဲစိတ် ရဲမာန် ဝင်အောင် သင်ကြပါ။ အလိမ်မာ မသင်ကြပါနဲ့ အမိုက်သင်ကြပါ။ ပြီးတော့ ဆရာ ဆရာမတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တသက်ကလေး ကောင်းစားဖို့ မကြည့်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောင်လာ နောက်သား ကောင်းစားဖို့ ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါလို့ ပြောဆို လိုပါကြောင်းနှင့် နိဂုံးချုပ် လိုက်ရာ ပရိသတ် အားလုံး သောင်းသောင်းဖြဖြ သြဘာ ပေးကြကြောင်း။
ဂွဏ်းခေါ်စာစောင် မတ် ၊၂၀၀၉ (မြန်မာပိုင်း)